Fianarana kabary – Hiatrika ny fivoriam-be ny Fimpima andrefan’Iarivo - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fianarana kabary – Hiatrika ny fivoriam-be ny Fimpima andrefan’Iarivo
Efa ao anatin’ny taom- pianarana tanteraka izao ny sampana kabary eo anivon’ny Fimpima. Ao anatin’izao fiandohan’ ny taona izao ihany koa anefa no hisian’ireo fivoriambe samihafa ka anisan’ny hanatanteraka izany ny Fimpima sampana Andrefan’Iarivo. Fivoriam-be izay hotanterahina, ny alahady 13 janoary izao etsy amin’ny foibe toeran’ ny Sampana ao amin’ny Lycée Ambohimanarina. Ankoatra ireo lafin-kevitra samihafa mahakasika ny fikambanana, anisan’ny hodinihina ao anatin’ity fivoriambe ity ihany koa ny mahakasika ny fiofanana sy ny fanatsarana ny fampianarana kabary.
Kabary, Mpanoratra Rijakely, 12.01.2013, 10:00	FIARAHAMONINA